Daawo qoonyahan Cabdinaasir Axmed Xaaji Aadan Afqalooc Oo kamida Masuuliyiinta Gobolka Sanaag Ee Xisbil Xaakimka Kulmiye Oo Hambalyo U Diray Madaxweyne Muuse Biixi
November 24, 2017, 12:08 pm
Daawo Madaxdhaqameed iyo Masuuliyiin Ka Soo Jeeda Bariga Sanaag Oo Taageero U Muujiyay Muuse Biixi
Daawo Madaxdhaqameedka Galbeedka Sanaag iyo Masuuliyiin Wakaalada Beeyada S/land Oo Si Mugleh U Taageeray Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Ku Xigeenkiisa
War Deg deg Ah Daawo Musharax Ciro Oo Hada Qaaracay Doorashadii Madaxtinimada S.land Iyo Sababta Keentay
November 5, 2017, 8:14 pm
Shaxda rasmiga ah ee ay garoonka kusoo geli doonaan kooxaha Man City iyo Arsenal kulanka ka dhacaya Etihad Stadium
MAN CITY: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, David Silva, Sane, De Bruyne, Sterling, Aguero
KEYDKA: Bravo, Danilo, Gundogan, Mangala, Bernardo Silva, Jesus, Toure
ARSENAL: Cech, Bellerin, Monreal, Koscielny, Kolasinac, Coquelin, Xhaka, Ramsey, Ozil, Sanchez, Iwobi
KEYDKA: Macey, Debuchy, Lacazette, Wilshere, Giroud, Walcott, Elneny.
November 5, 2017, 7:24 pm
DEG DEG: Chelsea oo xaaladdu ku xun tahay, xiddig muhiim ah ayaana seegaya kulanka ay wajahayaan Man United
Hal saac ka dib waxaa garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London ka bilaaban doona kulanka xiisaha iyo xamaasadda leh ee ka tirsan horyaalka England Premier League kaasoo dhexmaraya kooxaha Chelsea iyo Manchester United.
Laakiin kooxda tababare Antonio Conte waxaa kulankaan ka maqnaan doona daafacooda dambeedka dhexe ee reer Brazil David Luiz, sida ay warbaahinta Ingiriisku sheegeyso.
Sky Sports News ayaa sheegeysa inuu David Luiz yimid garoonka Stamford Bridge isagoo aan xirneyn maaliyadda rasmiga ah ee kooxda, kamana uusan qeyb qaadan almiintada.
Warbixintaan ayaa soo jeedineysa in uusan Luiz ku jirin liiska ciyaartoyda guud ee uu Conte usoo xushay derbiga ka dhacaya Stamford Bridge.
Si kastaba ha ahaatee, Sky Sports News waxay sheegeysaa in uusan wax dhaawac ah qabin daafacii hore ee kooxda PSG.